Dr. Tint Swe's Writings: March 2017
တခါတရံကို တစ်ခါတစ်ရံလို့မရေးခဲ့တဲ့ခေတ်မှာ ကာတွန်းစာအုပ်တွေပါ သတ်ပုံမှန်နဲ့သာ ရေးသားကြတယ်။
ခုခေတ်မှာတော့ စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေ၊ မြန်မာစာဆရာတွေ အများစုက တစ်မှတစ်၊ အဖြစ်သည်းနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တော့ သူတို့စာတွေထက် သတ်ပုံမှန်ကာတွန်းပဲ ဖတ်ချင်တယ်။
တခါက ဆွမ်မရာ နာဂရွာတရွာတွင် လော်ရော်ပေါ့ဟုသော လူတယောက်ရှိ၏ လို့ရေးခဲ့တယ်။ တစ်ခါက မဟုတ်။ ရွာတစ်ရွာ မဟုတ်။ လူတစ်ယောက် မဟုတ်။
ကျောင်းတပတ်ပိတ်ထားလို့ အိမ်ပြင်မထွက်ဖြစ်တာနဲ့ အပြင်မှာဘာတွေ ပြောင်းလဲနေသလဲ မသိပါ။ အခုမှ မောင်ပညာတင့်ဆွေပုံတွေ့လို့ ပန်းအဖြူတွေပွင့်နေပြီလို့ သိရတယ်။ ဒေလီမှာနေခဲ့ရတုံးကတော့ ငေါ့ခဲ့ဘူးတယ်။ ပန်းခြံတွေသာရှိ ပန်းမရှိ၊ ပန်းတွေတော့ရှိ၊ ပန်းပန်မယ့်သူမရှိ၊ ပန်းရောင်းသူဆိုတာ ယောက်ျားတွေသာဖြစ်ကြ၏လို့။
ကျွန်တော် အခုနေရတဲ့ဒေသ ဒီအချိန်မှာ အများဆုံးနဲ့ အလှဆုံးပွင့်နေတဲ့ပန်းကို (မက်နိုလီယာ) ပန်းလို့ခေါ်တယ်။ ဝါရှင်တန် ဒီစီမှာတော့ ချယ်ရီပွဲတော်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ မက်နိုလီယာပန်းဟာ အမေရိကားမှာတော့ မစ္စစ်စပိနဲ့ လူးဝစ္စယားနားမှာ ပြည်နယ်ပန်းလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ အမေရိကန်သမိုင်းမှာ တောင်ပိုင်းဒေသရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ ရုက္ခဗေဒလို Magnolia grandiflora လို့ခေါ်တယ်။ မက်နိုလီယာမျိုးစိတ်ပေါင်း (၂၁ဝ) ရှိသတဲ့။
ရှေးအလွန်ကျတဲ့ပန်းဖြစ်တယ်။ ပန်းနဲ့ အခေါက်ကို တရုပ်တိုင်းရင်းဆေးမှာသုံးကြတယ်။ ဂျပန်မှာ အရွက်ကို ဟင်းချက်ရာမှာသုံးတယ်။ အစားအစာ ထုပ်ပိုးဘို့လည်းသုံးတယ်။ M. sieboldii ကတော့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အမျိုးသားပန်းဖြစ်တယ်။
မြန်မာလို တတိုင်းမွှေးပန်းလို့ခေါ်တယ်။ အပွင့်အရောင်က မျိုးစုံတယ်။ အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အဝါရောင်၊ ပန်းခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်။ မက်နိုလီယာပန်းကို ရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတနဲ့ စာပေမှာလည်းဖွဲနွဲ့ကြတယ်။ တဂိုးကဗျာထဲမှာလည်း ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အရာရာ တတိုင်းမွှေးပန်းပါစေ။
ဆရာရေ မင်္ဂလာပါ။ တခုမှမမေးဘူးလို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒှပိန်ဆေးက အရမ်းပျံ့နံ့နေလို့ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုး ရှိနိုင်မလားလေး သိပါရစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာရေ ဖြေပေးပါနော်။
၁၈-၁ဝ-၂ဝ၁၁ နေ့က ယူအက်စ်အေ FDA ကနေ အများပြည်သူသိစေရန် သတိပေးချက်ထုတ်ထားခံရတဲ့ ပိန်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထဲမှာ ဘာတွေပါတယ်လို့ ထုတ်ဖေါ်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်။
Public Notification: “P57 Hoodia” Contains Undeclared Drug Ingredient https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationHealthFraud/ucm276074.htm
FDA စစ်ဆေးချက်အရ အဲဒီဆေးထဲမှာ Sibutramine ဆေးပါနေတယ်။ အဲဒီဆေးအမျိုးအစားကို ၂ဝ၁ဝ အောက်တိုဘာလ ကတည်းက တားမြစ်ထားတယ်။ သွေးတိုးတက်စေမယ်။ နှလုံးခုန်မြန်စေမယ်။ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ရာဇဝင်ရှိသူတွေ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တယ်။ သုံးစွဲနေသူတွေ ဆေးကို ချက်ချင်းရပ်သင့်တယ်။ ဘေးထွက် သက်ရောက်မှုတွေကို ဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးသင့်တယ်။
သတင်းထူးဆိုတာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ (၂) နေ့မနက် ၉ နာရီခွဲလောက်မှာ၊ နေရှင်နယ်စားပွဲတင်ရေဒီယိုလေးကနေ ပဌမတခါ။ စစ်သီချင်းတွေနဲ့အတူ နားထောင်ခဲ့ရတယ်။ ၃၁-၃-၂ဝ၁၆ နေ့မှာ ဒုတိယတခါ။ သီချင်းအထူးအဆန်းတွေမပါ။
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ သတင်းထူးတခုနဲ့တခုဟာ ၅၄ နှစ်နဲ့ ၂၈ ရက်ကွာတယ်။ ကြားထဲကအပြောင်းအလဲတွေဟာ ၁၉၆၂ ရဲ့ အဆက်တွေသာဖြစ်တယ်။
၁။ ကျမတူမလေးတယောက် အသက်က ၂၃ နှစ်ရှိပြီ။့့ မှာဘဲနေပါတယ်။ သူက အိမ်ထောင်ကျတာ နောက်လဆုို တနှစ်ပြည့်ပါပြီ။ သူတို့နှစ်ယောက်က တားဆေးတွေတော့ မသောက်ကြဘူးလုို့ သိရပါတယ်။ ခုဒီလမှ ကုိုယ်ဝန်ရှိပြီလုို့ မနေ့က သွေးနဲ့ဆီး နှစ်မျိုးလုံး စစ်ကြည့်တော့ သေချာသိသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတုို့ နှစ်ယောက်က တခုစုိုးရိမ်နေကြတယ်။ သူမက ကုိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆုိုတာ မသိလုို့ အရင်တပတ်က မတ်လ ၂၃ ရက်လောက်မှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖုို့ဆုိုပြီး ဓါတ်မှန်ရုိုက်လုိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ပုိုင်းမှုာ သူမရဲ့ ဗုိုက်အောက်ပုိုင်းနာတာ ၃၊ ၄ ရက်ရှိလာလုို့ မနေ့ကမှ ဆရာဝန်ဆီသွားပြမှ ကုိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသိကြတယ်။ သူတုို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးက ဒီလုို ကိုယ်ဝန်စကပ်တဲ့အချိန် ဓါတ်မှန်ရုိုက်လုိုက်လုို့ သန္ဓသားက တစုံတခု ဖြစ်သွားနုိုင်မလားဆိုပြီး စုိုးရိမ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဓါတ်မှန်ရုိုက်လုို့ အန္တရယ် ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ်ဒေါက်တာ။
၂။ ဆရာ့ဆောင်းပါးတွေထဲဖတ်ရတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် x- rays ဓာတ်ရောင်ခြည် မရိုက်သင့်ဘူး 2D ultrasound တို့ 3D 4D ရိုက်တာကိုတော့ ခုချိန်ထိ ဆိုးကျိုးကြီးကြီးမားမား ပြောကြတာမရှိသေးဘူး၊ (ကလေးအတွက် လေတို့ အပူတို့ပိုရမယ် ယောက်ျားလေးဆို စကားပြောနှေးမယ်) လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ goole ထဲမှာရှာကြည့်တော့လဲ နိုင်ငံခြားမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြလို့ လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖြန့်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးကြော်ငြာ fb page တစ်ခုမှာ ပြောင်းပြန် တင်ထားတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အနေနဲ့ သွားခံတွင်းကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရမယ့်အကြောင်းနဲ့ ဒီအတွက် x-rays ပါရိုက်ထားသင့်ကြောင်း ကျမကပြန်ချေပတော့ gender ကြိုသိဖို့နဲ့ 3d 4d ultrasound သာ မရိုက်သင့်ကြောင်း ပြန်ရေးထားပါတယ်။ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လုံးဝတလွဲ ဖြစ်နေတဲ့ message မျိုး မပေးသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဆရာရောဘယ်လို ထင်မြင်ပါသလဲ။
X-rays ဓါတ်မှန်ကတော့ သီအိုရီအရ နောင်တချိန်မှာကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒီအန္တရာယ်က နည်းပါတယ်။ Health Protection Agency (HPA) ရဲ့တွက်ချက်မှုက ဒီလိုရှိပါတယ်။
• ရင်ပတ်၊ သွား၊ လက်၊ ခြေတွေကိုရိုက်တဲ့ X-ray ဓါတ်မှန်မှာ နောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည် ရက် အနည်းငယ်စာနဲ့ညီပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ မှာ ၁ ထက်နည်းမယ်။
• ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်း X-ray ဓါတ်မှန်မှာ နောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည်ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ်စာနဲ့ညီပြီး ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ကနေ ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ မှာ ၁ ရှိနိုင်တယ်။
• တင်ပါး၊ တင်ပါးဆုံ၊ ခါးရိုး၊ ဗိုက်နဲ့ ရင်သား မင်မိုဂရမ် X-ray (mammogram) တွေဟာ နောက်ခံ ဓါတ်ရောင်ခြည် တနှစ်စာနဲ့ညီမျှပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၁ဝ,ဝဝဝ ကနေ ၁ဝဝ,ဝဝဝ မှာ ၁ ရှိနိုင်တယ်။
• Barium meal လို အဖြူရောင်မြင်ရအောင်သုံးတဲ့ဆေးနဲ့ X-ray ရိုက်ရင် နောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည် နှစ်အနည်းငယ်နဲ့ညီမျှပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၁,ဝဝဝ ကနေ ၁ဝ,ဝဝဝ မှာ ၁ ရှိနိုင်တယ်။
1. 2D, Doppler, 3D and 4D ultrasounds (အာလ်ထွာဆောင်း) စိတ်ချရသလား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/2d-doppler-3d-and-4d-ultrasounds.html
2. CT Scan ရိုက်တာ ဘာအန္တရာယ်ရှိသလဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/04/ct-scan.html
3. MRI Scan (အမ်-အာရ်-အိုင်) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/07/mri-scan.html
4. Pregnancy and x-ray at airport ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ လေဆိပ်ဓါတ်မှန် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-x-ray-at-airport_24.html
5. Risks of an X-ray and Diagnostic ultrasound အာလ်ထွာဆောင်းနဲ့ ဓါတ်မှန်အန္တရာယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/risks-of-x-ray-and-diagnostic-ultrasound.html
6. X-rays and infertility ဓါတ်မှန်နဲ့ ကလေးမရခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/x-rays-and-infertility.html
ဘုရားစင်မှာ ဆွမ်းတော်တင်တဲ့ပုံထဲမှာ အဖုံးပါတာ၊ အခွံသင်မထားတာတွေ့ရင် ပြောချင်သူတွေရှိတယ်။
ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်လိုက်သူမှာ ကောင်းစိတ်က သက်ရောက်မှုရှိမယ်။ သူများကောင်းမှုပြုတာကို မြင်သိရသူမှာပါ သက်ရောက်မှုရှိမယ်။ သာဓုခေါ်ခြင်း၊ ပြစ်တင်စိတ်နဲ့ ဒွိဟသံသယစိတ်တမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။
သံသယစိတ်ကနေ စူးစမ်းမှုပြုချင်ပြုလိမ့်မယ်။ အကျိုးရှိလာနိုင်တယ်။ မိမိမြင်သိယူဆထားတာသည်သာလျှင် အဆုံးစွန် မှန်နေပြီ၊ ထပ်သိဖို့မလိုတော့ပြီလို့ ယူဆသူတွေဟာ မပြည့်သေးတဲ့ခွက်ထဲ ထပ်မဖြည့်တော့ပဲ ကိုယ့်လက်နဲ့ဖုံးထာသလို ဖြစ်တယ်။
အာဖကန်နစ်စတန်မှာ (၆) ရာစုကတည်းကတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ပေ ၈၂ဝဝ အမြင့်ရှိတဲ့ ဘာမီယန် ဗုဒ္ဓရုပ်တုတော်ကို တာလီဘန်တွေကနေ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မတ်လမှ ဒိုင်းနမိုင်းနဲ့ ဖြိုခွဲခဲ့တယ်။ ဥဒ္ဒိဿစေတီရဲ့သက်ရောက်မှုကို ပြတာဖြစ်တယ်။ စေတီပုထိုးတွေကို ရွှေချထားထား၊ ထုံးသင်္ကန်းကပ်ထားထား၊ မြတ်စွာဘုရားကို ရည်မှန်းထားတာသာဖြစ်တယ်။ စေတီ၊ ဆင်းတုတော်၊ ဆွမ်းပန်းမှန်သမျှ အတူတူသာဖြစ်တယ်။ ကောင်းစိတ်နဲ့ ပြုထားတာသာဖြစ်တယ်။
လူတွေမှာ မတူခြားနားလှတဲ့ အသိ-အမြင်-အလုပ်တွေ ရောထွေးနေတယ်။ အသိကနေ အရာရာကိုဦးဆောင်တယ်။ အသိကိုတိုးစေဖို့ရာ မပြည့်သေးတဲ့ခွက်ကို ပိတ်မထားရပါ။ ကျွန်တော့်အိုးမှာ စလောင်းမပါ။ ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ ဆင်းတုတော်မှာ စိန်ဖူးမပါ။
ဆရာမောင်သာနိုးရေးထားတဲ့ စာတပုဒ်ကို စောစောက ကိုးကားခဲ့ပါတယ်။ မိန်းမပျိုကလေးရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို ရာဂုမ္မတ္တကြီးတဦးက ပွေ့ချီသွားတာကို မြင်လိုက်ရတော့တယ်။ တစ်ဦးကို တဦးလို့ပြင်လိုပါကြောင်း ကန်တော့ပါဆရာလို့ ရေးခဲ့တယ်။ ပို့စ်တင်ပြီးမှ ဆရာမောင်သာနိုးစာမူရင်းကို တွေ့ပါတယ်။ တဦးလို့သာရေးထားတာကို ပေ့ခ်ျတင်သူကသာ တစ်ဦးလုပ်ထားတာဖြစ်နေတယ်။ ဆရာမောင်သာနိုးရေးတဲ့ မြန်မာစာ ဆင်းရဲကြပုံများထဲကနေ ထုတ်နှုတ်တင်ပြပါရစေ။
၁။ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရဲ့ လက်ရေတပြင်တည်းကို လက်ရေတပြင်စီးရယ်လို့ လုပ်တယ်။ လက်ရည်တပြင်တည်းဆိုတာ တစိတ်တည်း တ၀မ်းတည်းလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။
၂။ မင်းဂံဘုတ်သီချင်းထဲမှာ ရှန်တဘက်မဟုတ်ပါ။ ရှာတဘက်ပါ။ အဲဒီခေတ်ကို ကောင်းကောင်းမီလိုက်သူ လူထု ဒေါ်အမာက ရှင်းပြပေမယ့် ခုထက်ထိ ဒီသီချင်းဆိုသူတိုင်းက ရှန်တဘက်နေတုန်းပဲ။
၃။ မြို့မငြိမ်းရဲ့ ပျို့မှာတမ်းသီချင်း မောင့်အပူပွေသူ ကို မောင့်အပေါ် ဗွေမယူပေါင်ရှင်လို့ မှားဆိုတယ်။
၄။ ဆရာငြိမ်းရဲ့ မပြီးသေးသော ပန်းချီကားသီချင်းမှာ ချစ်သူဟာလဲ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရောက်နှင့်တဲ့ကာမြင်ကို မလှမ်းမကမ်းမှာ ရောက်နှင့်ခဲ့တာမြင်လို့ မှားဆိုတယ်။
၅။ သွေးကာချီ ဖူးပွင့်ငုံဝေစီလို့ လှလှပပလေး ဖွဲ့နွဲ့ထားပါတယ်။ ဒါကို ခေတ်ပြန်ဆိုသူက ပွေ့ကာချီ ပွေ့ကာချီ ဖူးပွင့်ငုံဝေစီ လုပ်ပစ်လိုက်တော့ ပျက်ရော။
၆။ သက်ရှိ ခေတ်ဟောင်းတေးရေးဆရာတဦးကတော့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေ့ဆုံခန်းမှာ သူ့ရေးရင်းက ရှမ်းမလေးတွေ အချောရယ် ပေါတယ်လို့ ရေးတာ။ ဒါကို ရှမ်းမလေးတွေ ချောတယ် ပေါတယ်လုပ်ပစ်လိုက်တော့ သွားရောတဲ့။
၇။ လျှပ်ပန်းခွေနွဲ့ကို သီဆိုသွားသူတဦးက ဘ၀ဂ်စောင်းအောင်ကို ဘ၀ဂ်ဆောင်းအောင်လို့ ဆိုသွားတဲ့အကြောင်းပါ။ စသံ နဲ့ ဆသံကို မပီဘဲ ပြောကြဆိုကြတာ ရန်ကုန်မှာ ခေတ်စားနေပေမယ့် သီချင်းဆိုရာမှာ ပရိသတ်ရှေ့မှာတော့ ပီအောင် ကြိုးစားဖို့ ကောင်းတယ်။
၈။ ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာတခုမှာ ဝေဒနာကို ဝေသနာလို့ ပြောသွားတာ။ စောင်းတန်းကို ဇောင်းတန်းလို့ ဖတ်သွားတာကို (အမှန်က စောင်းဒန်း) လဲ ကြားလိုက်ရသေး။ မြန်မာပြည်တ၀န်း နာမည်ဆန်းတဲ့။ ဖြစ်သင့်တာက မြန်မာပြည်တ၀န်း နံမည်ဆန်း။ စာအတိုင်း ဖတ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ရေးတာက အမှန်၊ ဖတ်တာက အသံဆိုထားတာပဲ။ နံမည်လို့ဖတ်မှ မြန်မာပြည်နဲ့ ကာရန်ညီမှာပေါ့။
၉။ ကြော်ငြာတခုကတော့ လိပ်ခေါင်းရောဂါရှိလိုက်တာတဲ့။ ဘယ်မြန်မာလူမျိုးကမှ အဲဒီလို မအော်ဘူး။ အမလေး မြန်မာစကား မပြောတတ်လိုက်တာ၊ ကယ်ပါဦးလို့ပဲ ပြန်အော်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ကျင်းပလိမ့်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သွားရောက်လိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းတဲ့။ မြန်မာစကားမှာ လိမ့် နဲ့ မှာ တွဲသုံးတာ ရှိကို မရှိဘူး။ ဒီလူတွေ ဒီအသုံးအနှုန်းကို ဘယ်ကများ ကောက်ရထားပါလိမ့်လို့သာ အံ့သြမိရတော့တယ်။
၁ဝ။ နိုင်ငံကျော် သင်္ကြန်သီချင်းတပုဒ်မှာ မြနန္ဒာ ရေညိုညို ရစ်ကာသန်းတဲ့ ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ရယ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအံ့ကြီး သီဆိုအသံသွင်းထားရမှာလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ ကြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို နောက်ပါက်အဆိုတော်တဦးက မြလေးလေးနန္ဒာ ရေညိုညို ရစ်ကာသန်းတော့ရယ်လို့ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ ရစ်ကာသန်းတဲ့ကို ရစ်ကာသန်းတော့လုပ်လိုက်တာကတော့ မြန်မာစကားကို မတတ်တာပါပဲ။ ရှေးအတိတ်တဘောင်က အသက်ကလေးရယ်တဲ့ ရှည်စေလို၊ မြနန္ဒာရေညိုသန်းတဲ့ (တယ်) မန်းတောင်ရိပ်ခိုရယ်လို့ ရှိတယ်။ ဒါကို သီချင်းထဲမှာ သုံးထားတာပဲဖြစ်တယ်။ ရေညိုသန်းတော့ မန်းတောင်ရိပ်ခို ဆိုတော့ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတော့ဘူး။ ရေညိုသန်းသောအခါ မန်းတောင်ရိပ်ခိုဆိုတာ စကားအဆက်အစပ်ကိုမရှိတော့ဘူး။
မြနန္ဒာ ရေညိုညို ရစ်ကာသန်းတဲ့ ရွှေမန်းတောင်ရိပ့့် https://www.youtube.com/watch?v=J7Q8xqRrMJc
Date Rape Drugs Protection အဓမ္မကျင့်ရာသုံးတဲ့ဆေးတွေဘေးက ဝေးရအောင်
သင်္ကြန်အတွက်စာ။ ဒီစာမှာ တိုတိုသာရေးပါမယ်။ အဓမ္မကျင့်ရာသုံးတဲ့ဆေး သုံးမျိုးရှိတယ်။ အရက်တော့ လူတိုင်းသိလို့ ချန်ထားမယ်။ နေ့တိုင်း သင်္ကြန်လို ပျော်ချင်သူတွေကများတယ်။ သင်္ကြန်အပြီး မေးလာကြတော့မယ့် မေးခွန်းတွေကိုလည်း ကြိုသိနေတယ်။
၁။ Rohypnol (flunitrazepam) ရိုဇီနောလ်
၂။ GHB (gamma hydroxybutyric acid) ဂျီအိတ်ခ်ျဘီ
၃။ Ketamine ကက်တမင်း (မေ့ဆေး)
၁။ သူများတိုက်တာမှန်သမျှ ဘာမှ မသောက်ပါနဲ့။
၂။ သောက်စရာ ပုလင်း၊ ဗူးကို ကိုယ်တိုင်သာဖွင့်ပါ။
၃။ သောက်စရာ၊ စားစရာတိုင်းကို ကိုယ့်အနီးအနားမှသာထားပါ။ ရေအိမ်သွားပြီးအပြန် ကျန်တာကို မစား မသောက်တော့ပါနှင့်။
၄။ သောက်စရာမှန်သမျှ မျှဝေမသောက်ပါနှင့်။
၅။ အများစုပေါင်းပြီး ကိုယ့်ခွင်နဲ့ခပ်ယူသောက်ရတာကို မသောက်ပါနှင့်။ ဆေးခပ်ထားပြီး ဖြစ်နိုင်တယ်။
၆။ တယောက်ယောက်ကနေ ကိုယ့်အတွက် ဆိုင်ကနေမှာပေးမယ်ဆိုရင် မျက်မြင်မှာသာ မှာတာ၊ ဖေါက်တာ၊ ထည့်တာဖြစ်ပါစေ။ မှာပေးသူနဲ့ ဆိုင်ရှင်တို့ အပေးအယူ အချိတ်အဆက်ရှိထားနိုင်တာလည်း သတိပြုပါ။
၇။ ထူးခြားတဲ့ အနံ့၊ အရသာပါတဲ့သောက်စရာကို မသောက်သုံးပါနဲ့။ GHB ဆေးက နည်းနည်းငန်တယ်။
၈။ မသောက်တတ်တဲ့အဖေါ်တယောက်နဲ့သာ သွာလာပါ။
၉။ စားသောက်ပြီ ခေါင်းထဲမှာ ထူးခြားမှုဖြစ်လာတာနဲ့ ချက်ချင်း အကူအညီတောင်းပါ။
၁ဝ။ ဝေရာမဏိ သောက်တာစားတာ ရှောင်ကျဉ်ပါလေ။
1. Advice for Water festival သင်္ကြန်တွင်းကြ ယူကြုံးမရမဖြစ်ရအောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/advice-for-water-festival.html
2. Date Rape Drugs သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/date-rape-drugs.html
3. Dirty Drugs ဆရာဝန်သုံး လူဆိုးသုံးဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/dirty-drugs.html
4. Drugs တလွဲသုံးဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/drugs.html
5. Karaoke night လူလုံးမလှ အဖြစ်ရှုံးရတဲ့ ကာရာအိုကေည http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/karaoke-night.html
6. Lady coffee လေဒီကော်ဖီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/dirty-coffee.html
7. Predatory Drugs သတိလစ်စေရန်ပြုလုပ်နှိင်သည့် ဆေးဝါးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/predatory-drugs.html
8. Rape drugs အဓမ္မကျင့်ဘို့သုံးကြတဲ့ ဆေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/rape-drugs.html
9. Rohypnol ရိုဖီနောလ် မုဒိန်းဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/rohypnol.html
10. Warning to girls and women အမျိုးသမီး-မိန်းကလေးတွေ သတိပေးပါရစေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/warning-to-girls-and-women.html
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် ကျမသမီးလေးက အခု ၁၀ လထဲမှာပါ။ အခုရက်ပိုင်း (ကန်တော့ပါ) ရှုးသိပ်မပေါက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီနေ့ဆို ညနေ ၃:၀၀ လောက်ကမပေါက်တာ အခု ည ၁၂:၀၀ရှိပြီမပေါက်သေးပါဘူး။ ညနေက နို့ဗူး 120m စို့ပါတယ်။ ကျမရုံးကပြန်ရောက်တော့ ချိုစို့ပြီးအိပ်တာ ခုထိရှုးမပေါက်သေးပါဘူး။ တခြား ကလေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ group page တွေမှာ အရည်အစာလမ်းကြောင်းမှားနိုင်တာတို့ ရေးထားတာမျိးလဲတွေ့လို့ပါရှင်။
ဆီးနည်းတာ ရေတိုက်နည်းတာကို အရင်စဉ်းစားရမယ်။ ရာသီဥတုအရ ရေပိုလိုမယ်။ ဆီးလမ်းနဲ့ အစာလမ်း ဆက်စပ်မှုမရှိ။ အုပ်စုစာမျက်နှာမှာ အရပ်ပြောတွေဆိုရင် အကျိုးမရှိ။ အကျိုးနည်းစေမယ်။
၂။ ဆရာရေ ကလေးကို အားဆေးတိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို့ပါ။ မေမေတွေ group ကနေပြီး သူများကလေးတွေ တိုက်ကြတယ်ဆိုလို့ ဝယ်တိုက်ပါတယ်ဆရာ။ children DHA ပါ။ အဲ့တာလေးပါဆရာ။ သားသားက တခြားဆေး အကုန်သောက်ပြီး အဲ့တမျိုးမှ မသောက်ဖူးဖြစ်နေလို့ပါ။ သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးနဲ့ ဆက်တိုက်သင့်မတိုက်သင့် သိချင်လို့ပါဆရာ။ သားရဲ့အပြုအမူတွေက ရံဖန်ရံခါထူးဆန်းတော့ autism ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်လို့ပါဆရာ။
အော်တဇင်ဆိုတာ ဖွံ့ဖြိုးမှုရောဂါတခုပါ။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ မသိရသေးပါ။ ဘယ်လိုပျောက်စေမလဲ မသိသေးပါ။
- ADHD ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမမူတဲ့ စိတ်ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/adhd.html
- Autism အော်တဇင် ကလေးရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/autism.html
- Autism link to air pollution လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ (အော်တဇင်) မွေးရာပါကလေးရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/autism-link-to-air-pollution.html
- Mental health in children ကလေး စိတ်ရောဂါများ ပိုတိုးပွါး (၂ဝ၁၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/mental-health-in-children.html
အဲဒီ ၂ ခုက အခုပဲလာတာ။ အဲလိုမေးတာတွေလာတယ်။ Group ဂရုဆိုတဲ့ အစုလိုက်အပြန်အလှန်ပြောကြတာတွေကို ကိုးကားကြတယ်။ တချို့ဆို ကြောက်လန့်ပြီး မေးလာကြတယ်။ အချိန်မရလို့ အရင်မေးခွန်းတွေကို စုမထားဖြစ်ပါ။ စိတ်အားငယ်နေသူကို အားပေးစကားပြောတာက အကျိုးရှိတယ်။ ဘယ်ဆရာဝန်ကို သွားပြသင့်တယ်လို့ ညွှန်တာက အကျိုးရှိတယ်။ ဆရာဝန်မဟုတ်ပဲ ဆေးနည်းညွှန်တာ မှားဘို့များတယ်။ တချို့လည်း ရေလိုက်လွဲကြတယ်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာလည်း အဲလိုမျိုးတွေရှိတယ်။ တချို့အုပ်စုတွေက အရေမရအဖတ်မရတွေ။ တချို့က အဆင့်အတန်း ရှိတယ်။ သတိပညာ ဉာဏ်မြေကတုတ် ချွန်းကဲ့သို့အုပ်။ အုပ်စုစာမျက်နှာတွေ အဆင့်အတန်းရှိကြစေချင်တယ်။
သဘာဝဖြစ်စဉ်အရ နေ့အကူးမှာ နေမထွက်ခင် ညအမှောင်ကာလကိုဖြတ်သန်းရတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးတခုကနေ နောက်အသစ်တခုကို ကူးချိန်မှာ ညစာစားပွဲကြီးရှိခဲ့တာ မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ။ မနှစ်က။
ခရစ်ယန်ဘာသာမှာ The Last Supper လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ပန်းချီကားကြီးတခုရှိပါတယ်။ ၁၄၉၅ ခုနှစ် ကတည်းက အီတလီလူမျိုး ပန်းချီဆရာ (လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချိ) ကရေးဆွဲခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာမှာ ကနေ့ထိ နာမည်အကြီးဆုံး အနုပညာလက်ရာတခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့မှာထားရှိပါတယ်။ ပန်းချီကားဆွဲတာ ၁၄၉၈ အထိ စုစုပေါင်း (၃) နှစ်ကြာပါတယ်။ ခရစ်တော် ယေရှု (ဂျီးဆပ်စ်) ဂျေရုဆလင်မ်မြို့မှာ စားသုံးခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးညစာ (ညလယ်စာ) ကို သရုပ်ဖေါ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချိ) ရဲ့လက်ရာလိုပဲ ကနေ့ နေပြည်တော်က ညစာစားပွဲဟာလည်း နှစ်ပရိစ္ဆေဒရှည်ကြာအောင် မြန်မာပြည်သူတွေက အမှတ်ရနေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Unknown effectiveness ထိရောက်မှု မသေချာသည့်ဆေးများ
Unknown effectiveness မသေချာသည့်ဆေးများ
• Sibutramine စနစ်တကျ လေ့လာမှုတခုတွင် အသင့်အတင့် ကောင်းတာတွေ့ရှိရ။ အနောက်နိုင်ငံများ၊ ဥရောပ၊ အချားနိုင်ငံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေငြ်းချခွင့် ပိတ်ပင်ထားပြီးဖြစ်။
Unknown effectiveness ထိရောက်မှု မသေချားသည့်ဆေး
Likely to be ineffective or harmful ထိရောက်မှု မသေချာ၊ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည့်ဆေးများ
• Phenylpropanolamine စနစ်တကျ လေ့လာမှုတခုတွင် အသင့်အတင့် ကောင်းတာတွေ့ရှိရ။ သို့ရာတွင် ၃ ရက်အတွင်း Hemorrhagic strokes သွေးယိုထွက်မှုဖြစ်လာတာတွေ့ရှိရ။ ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးဖြစ်။
ဆန်းပြား ကြီးကျယ်မှုမပါ၊ ထည်ဝါ ခမ်းနားမှုမရှိ၊ စဖြူဥပါးပိလို့ ခေါ်ပါတယ်။ မုံရွာမှာသာရှိတယ်။
ကျွန်တော့်အဖို့မှာတော့ အမေချက်ကျွေးခဲ့တဲ့ဟင်းလျှာမို့ ကနေ့ညစာဟာ ဆယ်လေးငါးနှစ်သား ဖြစ်သွားစေလိုက်ပါတော့တယ်။
စဖြူဥပါးပိဆိုတာ ငါးအရွယ်အစားက ငါးစင်ရိုင်းလောက်။ ငါးအမျိုးအစားက အာပြဲခြောက်ငါးလို၊ အရိုးနည်းနည်းလေးကြမ်းတယ်။ အခုရောက်လာတာက အတော်လတ်တော့ ငါးအကောင်မပျက်သေးပါ။ နည်းနည်းတော့ ငန်တာပေါ့။
လူကြီးတယောက်မှာ သွေးထုထည် ၅ လီတာ (ဒရစ်ပုလင်း ၁ဝ လုံး) ရှိတယ်။ အမြဲတမ်းအဲလိုဖြစ်နေအောင် ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကနေ လုပ်ပေးနေတယ်။ ရုတ်တရက်နည်းသွားရင် အဲတာမျိုး သင့်တာတခုခုရွေးသွင်းပေးရတယ်။ သွေးသွန်လို့ သွေးမရနိုင်သေးခင်မှာ အသက်ဆက်ဖို့လည်းသွင်းရတယ်။ သတိထားဖို့က ၁ ပုလင်းစာ သွေးဆုံးရှုံးလို့ တပုလင်းသွင်းပေးရင် ထုထည်တော့ပြည့်မယ်။ သွေးကကျဲသွားမယ်။ အောက်စီဂျင်ဝမှာမဟုတ်ပါ။ သွေးလိုသူကို သွေးပဲပေးရတယ်။ မလိုအပ်ပဲသွင်းကြလည်း မကြာခဏတွေ့ရတယ်။ ပါးစပ်ကနေ ရေသောက်နိုင်သူ၊ သကြားစားနိုင်သူကို သွင်းပေးရင် သွင်းပေးပြီး ဆီးသွားချင်တာသာပိုမယ်။
အသက်နဲ့ အချက်အလက် မပြောချင်သူတွေ တနေ့မှာ (၁ဝ-၂ဝ) ယောက်လောက်ရှိတယ်။
1. Hi မင်္ဂလာပါဆရာ ပထမ ကိုယ်ဝန်မှာကလေး အသေကိုမွေးပါတယ် နောက်တကြိမ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ဘာတွေဂရုစိုက်ရမလဲအကြံလေးပေးပါဆရာ အဖြေပေးပါနော်
2. ဆရာ သားတခုလောက်မေးချင်လို့  ရာသီ လာတချက်မလာတချက် ခါးစစ်ကိုက်ရင် ကလေးရနိုင်လား စိုးရိမ်စရာများ ရှိသလား
3. ရာသီလာလို့ပြန်ပြချိန် အာလ်ထွာဆောင်းပါ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် သားသမီး ရနိုင်ပါလားရှင် အိမ်ထောင်ပြုလျှင် ကောင်းနိုင်ပါလား ရောဂါထပ်ဆိုးနိုင်ပါလားရှင် လမ်းညွှန်ပေးပါရှင်
မေးနည်းစည်းကမ်းပြန်ပို့နေရတာ တနေ့မှာ ၂ဝ-၃ဝ ယောက်ဆီကို။
အရေးထဲ ဖေ့စ်ဘွတ် (၁ဝ) နှစ်ပြည့်ဆိုတာက လာသေးတယ်။ နောင်မှာ တသက်လုံး (တသက်လုံး) ဒီလိုစာမျိုး မပို့ပါရန်။ သူများကို အလကား ဒုက္ခပေးနေတယ်။ အဲဒီစာထဲက ပိုက်ဆံ မလိုချင်ပါ။ အခုလိုစာပြန်ရေးနေရတဲ့ အချိန်ကိုသာ ပြန်ရချင်တယ်။ ဒီလိုပြန်ရေးရေးနေရတာ လူ ၃-၄ဝ လောက်ရှိပြီ။
ဆရာ ကိုဝန်ဖြတ်တာ ဆေးသုံးဖြတ်လို့ရပါသလား။
ကိုယ်ဝန်လို့ ရရေးတယ်။ ဖျက်တာလို့ ရေးရတယ်။
အမှားကို ဖျက်ပါ၊ ကိုယ်ဝန်ကို မဖျက်ပါနဲ့။ မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာနဲ့ ဖျက်ဆီးထားတာတွေကို ဖြတ်ကြပါစို့။
ကလေးအမေတယောက်က မေးတယ်။ သူတို့အိမ်နားမှာ ခဲလုပ်ငန်းရှိလို့ ကလေးအတွက်စိုးရိမ်ပြီး အိမ်ပြောင်းရမလား မေးပါတယ်။ မေးခွန်းကို ပြန်ရှာမလွယ်သေးလို့ ပို့စ်အဖြစ်အရင် တင်ပါတယ်။
ခဲမိုင်းနဲ့ ခဲစက်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်သူတွေနဲ့ ခဲဓါတ်ပါသုတ်ဆေးတွေကနေ ခဲဆိပ်သင့်နိုင်တယ်။ ခဲဓါတ်ပါတဲ့ ကစားစရာတွေကြောင့် အသက် (၆) နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ ပိုပြီးသတိထားသင့်တယ်။ ခဲဓါတ်ဟာ မြေထဲနဲ့ ရေထဲမှာလည်း ပါနေနိုင်တယ်။ ဘက်ထရီ၊ ဓါတ်ခဲ၊ ပိုက်၊ အိုးခွက်တွေမှာ ခဲပါတယ်။ တချို့ အလှအပသုံးတွေမှာလည်း ခဲဓါတ်ပါနေတယ်။ တချို့အစားအသောက်တွေထဲမှာလည်း ပါတယ်။ ကျည်ဆံမှာပါတယ်။ အိမ်အဟောင်းတွေက သုတ်ဆေးတွေကနေ ခဲဆိပ်သင့်နိုင်တယ်။
တချို့ဘယဆေးတွေထဲမှာ ခဲဓါတ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်နေရင် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ရှိတယ်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလထဲမှာ နယူးယောက်မြို့ ဆေးရုံတရုံမှာ မြန်မာပြည်က အလှကုန်တွေထဲမှာ ခဲဓါတ်က ခွင့်ပြုချက်ထက် ကျော်လွန်နေလို့ သတိပေးချက်ထုတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာသာပြန်ရရင် ဤကုန်ပစ္စည်းများထဲတွင် ခဲဓါတ်ပါဝင်မှု မြင့်မား။ ပါးစပ်ထဲဝင်ပါက အန္တရာယ်ရှိ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ကလေးများ မသုံးစွဲသင့်။ ဤကုန်ပစ္စည်းများအား မျိုချမိပါက အန္တရာယ်ရှိသည်။ အဲဒီသတင်းကို ကျွန်တော်က ၁၆-၂-၂ဝ၁၇ နေ့မှာ တင်ပါတယ်။ မကြာခင် ရွှေပြည်နန်းက ရှင်းလင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဆေးပညာစာနဲ့ သတိပေးစရာကိုသာ ရေးပါတယ်။ ထောက်ခံတာ ကန့်ကွက်တာ မလုပ်ပါ။
ခဲဆိပ်သင့်နေတာကို မသိကြတာများတယ်။ သွေးစစ်မှသာ များနေတာတွေ့တယ်။ ကလေးတွေမှာဖြစ်ရင် ဖွံဖြိုးမှုနှေးမယ်။ စာသင်ရာတာခက်မယ်။ မငိုအောင်ချော့ရတာခက်မယ်။ အစားပျက်မယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။ ဗိုက်အောင့်မယ်။ အားနည်းနေမယ်။ အန်မယ်။ ဝမ်းချုပ်မယ်။ နားအကြားနည်းမယ်။ တက်မယ်။
အသက်ကြီးသူတွေမှာ သွေးတိုးမယ်။ အဆစ်တွေ ကြွက်သားတွေနာမယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ မှတ်ဉာဏ်နည်းမယ်။ ဗိုက်နာမယ်။ စိတ်မးပြောင်းမယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်နိုင်တယ်။ ကလေးစောမွေးနိုင်တယ်။ ကလေးအသေမွေးနိုင်တယ်။
ကလေးကိုသွေးစစ်ရမယ်။ 45 mcg/dL နဲ့အထက်ဆို ဆေးကုသမှုခံယူရမယ်။ ကုသရာမှာ ခဲဆိပ်ရနေတာကနေ ဖယ်ရှားရမယ်။ Chelation therapy ဆေးပေးမယ်။ EDTA chelation therapy နည်းလည်းရှိတယ်။
ဒီရက်မှာ ဝါရှင်တန် ဒီစီနဲ့ မေရီလင်းကိုရောက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကလာကြတဲ့ လက်ပတောင်းမှာ မီးလောင်ဗုံးဒဏ်ခံရသူ ညီအကိုတဝမ်းကွဲတော်တဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ရှေ့နေကြီးဦးအောင်သိန်းတို့နဲ့ တွေ့ရတယ်။ ဗွီအိုအေနဲ့ အာရ်အက်ဖ်အေက မြန်မာတတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနဲ့ ဦးဘိုလှတင့်တို့နဲ့လည်းတွေ့တယ်။ တည်းခိုစရာ၊ သွားစရာလာစရာ၊ စားစရာ အစစ ကျေးဇူးပြုလိုက်ကြသူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီတပတ် ဥရောပဘောလုံးပွဲစဉ်တွေ နားထားတယ်။ နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေရှိလို့ပါ။ တောင်အမေရိကအသင်းတွေ ကစားတာ တချို့ပွဲတွေတော့ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အခု အာဂျင်တီးနားအသင်း ဘိုလီဗီးယား သွားကစားရမယ်။ လာပတ်စ် ကစားကွင်းက ကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်လို့ အားကစားသမားတွေအတွက်ခက်မယ်။ ပေပေါင်း ၁၁၉၄၂ မြင့်တယ်။
အဲတာကြောင့် အာဂျင်တီးနား ဘောလုံးသမားတွေကို ဆေးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်း အခုပဲထွက်လာတယ်။ ဆေးက ဗိုင်ယာဂရာခေါ်တယ်။ တချို့လည်း သိကြပါမယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးအတွက်းပေးတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအမည်ရင်းက Sildenafil ဖြစ်တယ်။ ဈေးချိုတဲ့ဆေးကို နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ရောင်းကြတယ်။ မူရင်း ဖိုက်ဇာ ဆေးကုမ္ပဏီကသာ ဗိုင်ယာဂရာ အမည်သုံးခွင့်ရှိတယ်။ ဒီဆေးက သွေးတိုးလည်းကျစေတယ်။ အဆုပ်ထဲကသွေးကြောတွေ ကျယ်စေလို့ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားတာမှာလည်း ပိုပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်စေတယ်။ အမြင့်ဒေသမှာ အောက်စီဂျင်နည်းတယ်။ ဗိုင်ယာဂရာက အဲတာကို ပိုကောင်းစေမယ်။
အဲဒီဆေးနဲ့အတူ ပါရာစီတမောနဲ့ ကေဖင်းလည်း တွဲပေးမယ်။ ကေဖင်းကနေ သွေးပိုလွှတ်ထုပေးမယ်။ တက်ကြွနေစေမယ်။ အက်စပရင်ဆေးကလည်း နှလုံးအတက်ရတာသက်သာစေမယ်။ သွေးကျဲစေမယ်။ သွေးခဲမှာ သက်သာစေမယ်။
ကြေက်လန့်လို့ပြေး။ ။ (ကြည်အောင်)
ခွေး "တစ်" ကောင်။
ည ၁ဝ နာရီ၊ ၅၇ မိနစ်။
ပုံ = Naung Kyaw
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မကလေးက အသက် ၃ နှစ်ပြည့်ပါပြီရှင့်။ ကလေးကို နားဖာကလော်ပေးပြီး နောက်ရက်ကျ နားကိုကုပ်ပြီး ထထငိုပါတယ်ဆရာ။ နားကိုတခုခုဖြစ်မှာ စိုးရိမ်လို့ပါဆရာ။ အဲ့တာဘာလုပ်ပေးရမလဲသိချင်လို့ပါဆရာ။ ကျွန်မစာထဲမှာ စာအရေးအသားအမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
တူမတယောက်က ရေးတယ်။ အပြောင်းအလဲတခု အချိုးအကွေ့တခု ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်း ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကို လက်ခံတတ်အောင် စိတ်ထားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ဖေဖေကို သမီးကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေရယ် သမီးက ရင့်ကျက်ဖို့ လိုသေးတယ်။ ဒီတခါအပြောင်းအလဲကိုတော့ သမီးလက်ခံဖို့ကြိုစားတာ တော်တော်မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သမီးသိပ်ကြိုက်တဲ့ ဆရာကြီးမြသန်းတင့်ရဲ့ လေရူးသုန်သုန် ဝတ္ထုထဲက စကားလက်အိုဟာယာလိုမျိုး ဟိုကွေ့ရောက်ရင် ဟိုတတ်နဲ့လှော်၊ ဒီကွေ့မှာဒီတတ်နဲ့လှော်တတ်အောင် သမီးကြိုးစားမယ်။ လောကမှာ ပညာဦးစီးတဲ့ အဆုံးအမရှိတဲ့ ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့ အဆုံးအမကို အချိန်နဲ့အမျှ ရရပါလို၏။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အားမနာတမ်း ပွင့်ပွင့်လင်လင်းပြောရရင် လေရူးသုန်သုန်ဝတ္ထုကို လူပြောများသလောက်၊ အမွှမ်းတင်ကြသလောက် မစွဲမက်ပါ။ ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေက ပိုပြီးစွဲထင်ကျန်ရစ်ပြီး၊ ရှေ့ကနေ ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက မာဂရက် မစ်ချယ်ရဲ့ လိုင်းတွေလို မဟုတ်ပါ။
• တက် မရှိ လက်နဲ့လှော်။
• လက် မအား ခြေဖဝါးနဲ့လှော်။
• လက်ခြေ မကောင်း၊ ဆုတောင်းနဲ့သာ လှော်ပါလေ။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = Gas ဓါတ်ငွေ့
ကွန်မင့်တခု = Cthu Aung ကျွန်​​တော်​ ငပိန်းတယောက်​ပါ ဆရာ ဘာ message ကို​ပေးချင်​တာဆိုတာ ကျွန်​​တော်​မတွေးတတ်​ဘူးခင်​ဗျ
Tint Swe ဆောရီး ကျွန်တော်က စာရေးညံ့တယ်။ ကျော်လွှားသာ သွားလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်က စာရေးတဲ့အခါ အကြောင်းအချက်ကို သတိထားတာများလို့ စာရိုက်တာနဲ့ သတ်ပုံမှာ မှားလေ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဲလိုထင်ထားတာ မှားမှန်းသိသိလာတယ်။ အထက်ကလိုကွန်မင့်မျိုးက ၂-၃ လမှာ တခါလောက် လာတတ်လို့ပါ။ အကြောင်းအချက်လည်း ဖတ်တဲ့သူတွေ နားလည်အောင် မရေးနိုင်ပါလားလို့။ ဆောရီး။
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ့့ ကျနော်အဲ့ညပြီး နောက်နေ့ညနေမှာပဲ ကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ရေး ဝေဘာဂီကိုသွားပြီး အကျိုးကြောင်းပြောပြပြီး မကူးဆက်နိုင်အောင်ကာကွယ်နိုင်မလားဆိုတော့ ၂၈ ရက်သောက်ရမယ့် ART လား ARV လား အဲ့ဆေးပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဆေးက ဘယ်လောက်အထိကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလဲဆရာ။ တဖတ်အမျိုးသမီးမှာ
ရောဂါရှိမရှိ မသိပါဘူး။ ကျနော်အရမ်းစိုးရိမ်မိနေပါတယ်ဆရာ။ ၂ လုံးသောက်တာရှိတယ်။ ၅လုံးသောက်တာရှိတယ်ဆိုလို့ ကျနော် ၅ လုံးသောက်တာကိုရွေးလိုက်ပြီး သောက်နေတာ အခုဆို ၄ ရက်ရှိပါပြီ။ ကျနော်သိချင်တာကဆရာ။ အဲ့ဆေးပုံမှန် အချိန်မှန် ၂၈ ရက်သောက်ပြီးလို့ ၃လ ၁ကြိမ်သွေးစစ် ၆လ ၁ကြိမ်သွေးစစ် အဲ့ချိန်မှ HIV မရှိဘူးဆို လုံးဝ စိတ်ချလက်ချ နေနိုင်ပြီလားဆရာ။ နောက်မှရောဂါပေါ်လာတာတွေရှိလား။
ကူးဆက် မဟုတ်။ ကူးစက်လို့ရေးရ။
၂။ ဆရာ ကျွန်တော်က HIV လူနာတွေကို ကြည့်ပေးနေရတဲ့ ဆရာဝန်တယောက်ပါခင်ဗျ။ ဆရာရေးထားတာတခုမှာ PMTCT အတွက် အဲဒီမှာ အမေကို AZT combination ပေးတယ် ကလေးကိုလဲ မွေးပြီး တလခွဲအထိ zidivudine ပေးတယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရလို့ပါ။ National guidelines တွေက တခုနဲ့တခု နဲနဲစီကွာလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ WHO Guideline နဲ့ မတူလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတာကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ပိုးရှိမှန်းသိရင် Tenofovir/Lamivudine/Efaveranze သုံးမျိုးစပ်ကို မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် အရင်တိုက်တယ်ဆရာ။ Viral load ကတော့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဖောက်တာပါ။ ပြီးရင် မွေးလာတဲ့ကလေးကို nevarapine syrup တိုက်တယ် မွေးပြီး ခြောက်ပတ်အထိပေါ့။ ပြီးမှကလေးကို DNA PCR နဲ့ သွေးစစ်တယ်ဆရာ။
ကျွန်တော်အများဆုံး ကိုးကားနိုင်တာတွေက ရှာရတာလွယ်တဲ့ ယူအက်စ်နဲ့ ယူကေက သုတေသနတွေသာ ဖြစ်တယ်။ ဆေးသုတေသနဆိုတလည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်။ ဆေးကုသနည်းတွေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်က နေရာဒေသအလိုက် မတူတာလည်း ရှိတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ တတ်နိုင်မှုနဲ့ ထိရောက်မှု စတာတွေကို ကြည့်ရပါတယ်။ အဲတာကြောင့် ကျွန်တော်က ပြည်တွင်းမှာ တကယ်ရှိနေတာတွေကို သိပ်သိချင်တယ်။ မနေ့ကပဲ တီဘီအကြောင်းမှာ ဖြေရသေးတယ်။ ကလေး ကာကွယ်ဆေးထိုးလမ်းညွှန်ကိုသိချင်လို့ ဆရာတယောက်ကို မေးထားတာ အဲဒီဆရာက မေ့နေပြီနဲ့တူတယ်။ မပို့သေးဘူး။
HIV ကို Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) ပိုးနဲ့ မတွေ့ခင် ဆေးကြိုတင်သောက်နည်းနဲ့ ကာကွယ်နိုင်တယ်။ လိုအပ်လို့ သောက်ရတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ HIV သံသယရှိတဲ့ လိင်မှုပြုမယ်ဆိုသူတိုင်း Truvada ဆေး ၂ ပြားကို ၂၄ နာရီ ကြိုတင် သောက်ပါ။ တကယ်ပဲ အဲလို အမှုပြုပြီးရင် တရက် ၁ လုံး၊ ၂ ရက်ဆက် သောက်လိုက်ပါ။ ၃ လနေရင် ဆေးစစ်ပါ။ Truvada ဟာ သောက်ဆေးပြားဖြစ်တယ်။ လူကြီးတွေကို တနေ့မှာ Tenofovir (Viread) 300 mg နဲ့ Emtricitabine (Emtriva) 200 mg ပါတဲ့ တွဲထားတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ ကျောက်ကပ်မကောင်းရင် ဆေးလျှော့ရမယ်။ ဆေးဝါးဗေဒလို Nucleoside analog reverse transcriptase inhibitors (Nukes) ဖြစ်တယ်။ HIV ရဲ့ RNA ကနေ DNA ဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးတဲ့ (အင်ဇိုင်းမ်) အပြောင်းအလဲကို သက်ရောက်စေတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ HIV ပိုးရဲ့ Genetic code မျိုးဗီဇ (ကုတ်) ကို ကူးစက်ခံရတဲ့ (ဆဲလ်) ရဲ့ Genetic code မျိုးဗီဇ (ကုတ်) ထဲကို မဝင်နိုင်ခင် လုပ်ပေးတာ ဖြစ်တယ်။
Truvada ဆေးကို ၂ဝဝ၄ ကတည်းက ကူးစက်ခံထားရသူတွေအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။ ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးလူငယ်တွေနဲ့ Hepatitis B ဘီပိုးရှိနေသူတွေအတွက် စမ်းသပ်မှုတွေ မစုံသေးပါ။ ဆေးမပေးခင် CD4 Cell count နဲ့ Viral load (ဗိုင်းရပ်စ်) အရေအတွက်၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါ သိရမယ်။ ဒီဆေးနဲ့ တခြား (ARVs) တွေနဲ့ တွဲသောက်သူတွေမှာ (ဗိုင်းရပ်စ်) အရေအတွက် သိသိသာသာ လျှော့လာတာတယ်။ CD4 cell counts တက်လာတယ်။
ဘယ် ART/ARV ဆေးမဆို သောက်ခါစမှာ ခေါင်းကိုက်၊ သွေးဖိအားတက်၊ နေမကောင်းသလို ခံစားရတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဆေးသောက်တာ ကြာရင်တော့ ခံစားရတာတွေသက်သာလာမယ်။ Truvada ဆေးကြောင့် ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့-အန်၊ အနီပြင်ထွက်၊ အစားပျက်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ တချို့ လူတွေမှာ Creatinine နဲ့ Transaminases (အင်ဇိုင်းမ်) တွေတက်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အသဲ၊ ကျောက်ကပ် မကောင်းရင် များနေတယ်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအားနည်းစေနိုင်သေးလို့ (ကယ်လ်စီယမ်) နဲ့ ဗီတာမင် (ဒီ) တွေပါ သောက်တာ ကောင်းတယ်။ တချို့မှာ Lactic acid လဲတက်နိုင်တယ်။ အသည်းအဆီဖုံးတာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Lamivudine (Epivir, 3TC), Combivir, Trizivir or Epzicom ဆေးတွေနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ဘူး။
အမေရိကန် ဖက်ဒရယ်လမ်းညွှန်ကို ၁၄-၅-၂ဝ၁၄ နေ့က ထုတ်ထားတာပါ။ Truvada ဆေးက ၉၂% ကာကွယ်တယ်။ (ဂေး) တွေ၊ စအိုလမ်းသုံးသူတွေ နေ့တိုင်းသောက်ရတယ်။ ၃ လနေရင် ဆေးစစ်ပါ။ ယောက်ျားသုံး (လေးတက်စ် ကွန်ဒွမ်) သုံးရင် ၈၅% ကာကွယ်နိုင်တယ်။
15. HIV screening tests http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-screening-tests.html
16. HIV Sexual transmission လိင်ကတဆင့် HIV ကူးစက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-sexual-transmission-hiv.html
17. HIV Summary အတိုချုပ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-cd4-viral-load-and-art.html
18. HIV Tests (1) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-1.html
19. HIV Tests (2) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-2.html
20. HIV Tests (3) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-3.html
21. HIV vaccine ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-vaccine.html
22. HIV ပိုးရှိနေသူတွေကိုပေးနေတဲ့ Truvada ဆေးဟာ ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ ၈၆% နည်းစေတယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/hiv-truvada.html
23. HIV အတွက် Truvada ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-truvada.html
24. HIV ဆေးသစ် Edurant ကို FDA က အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-edurant-fda.html
25. HIV, CD4, Viral load and ART အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-cd4-viral-load-and-art.html
26. HIV/AIDS Myths and Facts http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hivaids-myths-and-facts.html
27. HIV: How it spreads ဘယ်လိုကူးစက်လဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-how-it-spreads.html
28. HIV-AIDS at glance http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-aids-at-glance.html
29. HIV-AIDS links in my new Blog
30. HIV-AIDS ရန်ကုန်ရှိ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/hiv-aids.html
31. How to live with HIV-positive person အတူနေမယ် မကူးစေရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/how-to-live-with-hiv-positive-person.html
32. Pregnancy and HIV http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hiv-hiv_15.html
33. World AIDS Day ကမ္ဘာ့ (အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) နေ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/world-aids-day.html